Oyena Mvelisi weNdibano ye-SMT PCB – PCBFuture
Yintoni indibano ye-SMT PCB?
Indibano ye-SMT PCB yindlela apho amacandelo ombane afakwe ngokuthe ngqo kumphezulu webhodi yesekethe eprintiweyo.Ivumela amacandelo ukuba inyuswe ngqo phezu komphezulu intaba PCB.Le teknoloji inceda ukwenza izinto ezincinci.
Itekhnoloji yokunyuka komphezulu yeyona nkqubo isetyenziswa kakhulu.Ngoko ke, ukusetyenziswa kwayo kubanzi kakhulu.Njengoko itekhnoloji yokunyuka komphezulu ifaka izinto ezininzi ze-elektroniki kwindawo encinci, uninzi lwezixhobo namhlanje zisebenzisa itekhnoloji yokunyuka komphezulu.Ke njengoko i-miniaturization iba ngakumbi kwaye ibaluleke ngakumbi, ukubaluleka kobuchwepheshe be-SMT kuyabonakala.
I-PCBFuture ineminyaka engaphezu kwe-10 yamava kwindibano ye-SMT PCB.Ngokusebenzisa inkqubo yendibano ye-SMT ezenzekelayo, iibhodi zethu zesekethe zinokuqinisekisa ukusebenza kakuhle kwezona zicelo zinzima.
Yintoni inkqubo ye-SMT PCB Assembly?
Inkqubo yokusebenzisa i-SMT ukwenza izixhobo zePCB ibandakanya ukusetyenziswa koomatshini abazenzekelayo ukudibanisa izinto zombane.Lo matshini ubeka ezi zinto kwibhodi yesekethe, kodwa ngaphambi koko, ifayile ye-PCB kufuneka ihlolwe ukuze kuqinisekiswe ukuba abanazo iingxaki ezichaphazela ukwenziwa kunye nokusebenza kwesixhobo.Emva kokuqinisekisa ukuba yonke into ilungile, inkqubo ye-SMT PCB assembly ayipheleli ekuthengiseni nasekubekeni izinto okanye iikhompawundi kwi-PCB.Le nkqubo ilandelayo yemveliso kufuneka nayo ilandelwe.
1. Faka i-solder paste
Inyathelo lokuqala xa udibanisa ibhodi ye-SMT PCB usebenzisa i-soldering paste.Intlama ingafakwa kwi-PCB ngeteknoloji yesikrini sesilika.Isenokusetyenziswa kusetyenziswa istencil yePCB elungiselelwe ukusuka kwifayile yemveliso yeCAD efanayo.Udinga kuphela ukusika i-stencils usebenzisa i-laser kwaye usebenzise i-soldering paste kwiindawo apho uya kuthengisa amacandelo.Ukusetyenziswa kwe-solder paste kufuneka kuqhutywe kwindawo epholileyo.Wakuba ugqibile ukufaka isicelo, unokulinda ixesha elithile lendibano.
2. Ukuhlolwa kwe-solder paste yakho
Emva kokuba i-solder paste isetyenziswe ebhodini, inyathelo elilandelayo kukuhlala liyijonga ngokusebenzisa iindlela zokuhlola i-solder paste.Le nkqubo ibaluleke kakhulu, ngakumbi xa uhlalutya indawo ye-solder paste, inani le-solder paste esetyenzisiweyo, kunye neminye imiba esisiseko.
3. Ukuqinisekiswa kwenkqubo
Nje ukuba ibhodi yakho yePCB isebenzisa amacandelo e-SMT nakweliphi na icala, kuya kubakho imfuneko yokuqwalasela ukuphinda inkqubo efanayo yokuqinisekisa icala lesibini.uya kuba nakho ukulandelela elona xesha lifanelekileyo lokuveza incama ye-solder kubushushu begumbi apha.Oku kuxa ibhodi yakho yesekethe ilungele ukuhlanganiswa.Amacandelo aya kuhlala elungele umzi-mveliso olandelayo.
4. Iikhithi zeNdibano
Oku kujongana ne-BOM (iBill of Materials) esetyenziswe yi-CM ukuhlalutya idatha.Oku kuququzelela uphuhliso lweekiti zendibano ye-BOM.
5. Iikiti zokugcinwa kwempahla kunye nezinto
Sebenzisa ibhakhowudi ukuyikhupha kwisitokhwe kwaye uyifake kwikiti yendibano.Xa amacandelo efakwe ngokupheleleyo kwikhithi, athatyathwa asiwe kwindawo yokukhetha kunye nendawo ebizwa ngokuba yi-surface Mount technology.
6. Ukulungiswa kwamacandelo okubekwa
Isixhobo sokukhetha kunye nendawo siqeshwe apha ukubamba yonke into yokuhlanganisa.Umtshini usebenzisa i-cartridge ehamba kunye neqhosha elikhethekileyo elihambelana ne-BOM kit assembly.Umatshini wenzelwe ukuxelela indawo ebanjwe yikhatriji.
Yintoni enokubonelela ngendibano ye-SMT PCB?
Iibhodi zesekethe eziprintiweyo ze-SMT zinoluhlu olubanzi lweenzuzo.Eyona nto ibaluleke kakhulu kwi-SMT yisayizi encinci kunye nobunzima obulula.Ukongeza, ezinye izibonelelo ze-SMT ziquka:
1. Ukuveliswa ngokukhawuleza: iibhodi zeesekethe zinokudityaniswa ngaphandle kokugaya, oku kuthetha ukuba ukuveliswa kukhawuleza kakhulu.
2. Izantya zesekethe eziphezulu: Enyanisweni, esi sesinye sezizathu eziphambili zokuba kutheni i-SMT ibe yiteknoloji yokuzikhethela namhlanje.
3. I-automation yeNdibano: inokuqonda i-automation kunye neenzuzo zayo ezininzi.
4. Iindleko: Ixabiso lamalungu amancinane lidla ngokuba ngaphantsi kunelo lamalungu okuphumela kumngxuma.
5. Ukuxinana: Bavumela amacandelo amaninzi ukuba abekwe kumacala omabini ebhodi yesekethe eprintiweyo ye-SMT.
6. Uyilo lokuguquguquka: ngomngxuma kunye nemveliso yecandelo le-SMT inokudityaniswa ukubonelela ngokusebenza okukhulu.
7. Ukusebenza okuphuculweyo: Uxhumo lwe-SMT luthembeke ngakumbi, ngoko ibhodi inokuphucula ukusebenza.
Kutheni ukhetha inkonzo yethu yendibano ye-SMT PCB?
I-PCBFuture yasekwa ngo-2009, kwaye sineminyaka engaphezu kweshumi kwindibano ye-SMT PCB.Sizibophelele ekufezekiseni iimfuno zabathengi bethu abavela kumashishini ahlukeneyo ngokwexesha lomgangatho, ukuhanjiswa, ukuphumelela kweendleko kunye nesisombululo sePCB.Kwakhona bonelela ngenkonzo ekhethekileyo elungiselelweyo.Senza ngokwezifiso iPCB kuhlahlo lwabiwo-mali lwakho kunye nokonga ixesha lakho lokufumana imakethi.
1. 24-iyure online quote.
2. Inkonzo engxamisekileyo yeeyure ezili-12 kwiprototype ye-PCB.
3. Amaxabiso afikelelekayo nanokhuphiswano.
4. Uvavanyo lomsebenzi olusekelwe kwiimfuno ezithile zomthengi.
5. Iqela lethu lobuchwephesha kunye nelithembekileyo lenza kube lula kuwe ukuseta okanye ukusombulula iingxaki.Yile nto sifuna ukwanelisa abathengi bethu.Sinikezela ngeseti epheleleyo yeenkonzo ukusuka kuyilo lwesekethe ukuya kwizixhobo ezigqityiweyo kwiibhodi zeesekethe eziprintiweyo.Sihlala sonwabile ukukubonelela ngeenkonzo zodidi lokuqala.
I-6. Iminyaka eyi-10 yamava kwindawo yokuthenga ye-Electronics Components.
7. Sizisa iiPCB zakho ngokuthe ngqo kwaye ngokukhawuleza emva kokugqiba ukusuka kumzi-mveliso.
8. I-Factory ye-SMT ethembekileyo kunye ne-8 SMT Lines, iiMvavanyo ze-100% zeMsebenzi, iMveliso yePrototype, Isisombululo esiSebenzayo.
9. Sixhotyiswe ngeteknoloji ephezulu kakhulu yokuqinisekisa ukuba sibonelela ngeemveliso ezisemgangathweni.Sikwaxhotyiswe ngokupheleleyo ukuba sikubonelele ngeenkonzo zendibano ye-SMT ye-turnkey esusa yonke ingxaki kuwe.
Inkqubo yendibano ye-SMT itshintsha inkqubo yokwenziwa kwe-PCB kwaye iyise kwinqanaba elilandelayo.Le yitekhnoloji eneendleko, esebenzayo kwaye ethembekileyo yokwenza iiPCB.Ekuphela kwento elindelekileyo kwixesha elizayo kuphuculo lwetekhnoloji ye-SMT PCB yonke kuba ingeyonkqubo ilula.Iindaba ezimnandi kukuba nanamhlanje, ungafumana iibhodi PCB ethembekileyo ngexabiso elifikelelekayo.Nangona kunjalo, kufanelekile ukuqhagamshelana nenjineli ethembekileyo okanye umenzi onezixhobo ezifanelekileyo kunye namava okuhlangabezana neemfuno zebhodi yakho.Ukukunceda ukuba uqonde umenzi ongcono kakhulu, unokuhlala ucinga ukusebenzisa izixhobo zanamhlanje, izinto zodidi lokuqala, amaxabiso afikelelekayo, kunye nabavelisi abahambisa ngexesha.
Injongo ye-PCBFuture kukubonelela ngeshishini elithembekileyo le-PCB elenziwe nge-PCB kunye neenkonzo zendibano ukusuka kwiprototype ukuya kwimveliso ngendlela enexabiso eliphantsi.Injongo yethu kukunceda umsebenzisi ngamnye ukuba abe yingcali ejikelezwe kakuhle, enezinto ezininzi ezinokuzisa ngokuzithemba iimbono ezintsha zobunjineli eziya kujongana nalo naliphi na inani lemisebenzi efanelekileyo, iingxaki kunye nobuchwepheshe.
1. Ziziphi iindlela zobugcisa ezisetyenziswe kwiNdibano ye-SMT?
Ÿ Ukusetyenziswa kwentlama yesoda
Ÿ Ukubeka amalungu
Ÿ Ukusoda iibhodi ngenkqubo yokuhanjiswa kwakhona
2. Ngaba i-Soldering ye-Manual ingasetyenziswa kwinkqubo yendibano yebhodi yesekethe eprintiweyo ye-SMT?
Ewe, indibaniselwano yazo zombini i-soldering manual kunye ne-automated soldering ingasetyenziswa.
3. Ngaba ubonelela ngendibano yebhodi yesekethe eprintiweyo yasimahla?
Ngokuqinisekileyo, iindibano zethu zePCB zikhokelwa simahla.
4. Zeziphi iibhodi zesekethe ze-SMT ezahlukeneyo ezinokudityaniswa nePCBFuture?
Sinokuhlanganisa iibhodi zesekethe eziprintiweyo ze-SMT enye namacala amabini kwezi ntlobo zilandelayo:
Ÿ Uluhlu lweGridi yeBhola (BGA)
Ÿ I-Ultra-Fine Ball Grid Array (uBGA)
Ÿ I-Quad Flat Pack No-Lead (QFN)
Ÿ Ipakethe yeFlat yeQuad (QFP)
Ÿ Ulwandlalo oluNcinane lweSekethe eDityanisiweyo (SOIC)
Ÿ Isithwali sePlastiki esiKhokela kwiChip (PLCC)
Ÿ I-Package-On-Package (PoP)
5. Ngaba uyayixhasa indibano yamacandelo e-BGA?
Ewe sakwenza njalo.
6. Yintoni umahluko phakathi kwe-SMT ne-SMD?
Isixhobo se-surface Mount (SMD) sibizwa ngokuba sisixhobo sombane esixhonywe kwibhodi yesekethe eprintiweyo.Ngokwahlukileyo, iteknoloji ye-surface Mount (SMT) inxulumene nendlela esetyenziselwa ukubeka izinto ze-elektroniki kwii-PCBs.
7.Ngaba ubonelela ngeebhodi zeprototype ye-SMT?
Ewe, sikuxhobise ngokupheleleyo ukusingatha naluphi na uhlobo lweemfuno zebhodi ye-SMT yesiko.
8. Zithini iiprothokholi zakho zovavanyo lwendibano ye-surface mount?
Iiprothokholi zethu zokuvavanya kwiNdibano yeMount Mount ziquka:
Ÿ Uhlolo oluzenzekelayo lwaMacho
Ÿ Uvavanyo lweX-reyi
Ÿ Uvavanyo lwangaphakathi
Ÿ Uvavanyo olusebenzayo
9.Ngaba unokuthembela kuwe ngenkonzo yendibano ye-SMT ye-turnkey?
Ewe.Ungathembela kuthi ngenkonzo yendibano ye-SMT ye-turnkey.
10.Ngaba unokubonelela ngeebhodi zesekethe eziprintiweyo ze-SMT ngokweemfuno zethu zesiko?Ngaba singalufumana uqikelelo lweendleko zesiko kuwe?
Ewe, kumacala omabini.Siza kwabelana ngeengcaphuno zesiko ngokusekelwe kwiimfuno zakho ze-bespoke kwaye sihlanganise iibhodi ezingenanto ze-SMT PCB ngokufanelekileyo.